Shikhar Samachar | बजार कहिले आउछ काेराेनाविरुद्धकाे खाेप ? बजार कहिले आउछ काेराेनाविरुद्धकाे खाेप ?
बजार कहिले आउछ काेराेनाविरुद्धकाे खाेप ?
काठमाण्डौं- विश्वभरलाई ठप्प प्रायः बनाएको तथा गम्भीर जनस्वास्थ्य संकट उत्पन्न गराएको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको विकासमा वैज्ञानिकहरुको प्रयास सार्थक बन्ने क्रममा देखिएको छ।
तेस्रो चरणको परीक्षणमा प्रभावकारी तथा सुरक्षित देखिएको खोप सर्वसाधारणको प्रयोगमा ल्याउनका लागि नियामक निकायले नतिजाको विश्लेषण गरि स्वीकृति प्रदान गर्छ ।